कोरोनाबारे सचेतना जरूरी – Chitwan Post
कोरोनाबारे सचेतना जरूरी
डिसेम्बरको अन्तिम सातादेखि चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले महामारीको रुप लिइसकेको छ । सुरूवातमा सामान्य ठानिए पनि त्यसको त्रास र प्रकोप ६९ मुलुकमा फैलिसकेको छ । विभिन्न समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार सोमबार बिहानसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर ३ हजार ५८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने कुल ८९ हजार २५२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । हालसम्म चीनबाहिर ९ हजार २२६ जनामा कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको छ । चीनपछि दक्षिण कोरिया, इटाली, इरान, जापान, जर्मनी, फ्रान्स, सिंगापुर र हङ्कङ बढी प्रभावित भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्दै एक महिनाअघिदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चेतावनी जारी गरिसकेको छ । र, नेपाललाई पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको मुलुकका रुपमा सावधान गराउँदै आएको छ । विश्वका विभिन्न देशले कोरोना भाइरसविरूद्ध युद्धस्तरमा सतर्कता अपनाउँदै गर्दा नेपालको तयारी भने ‘भगवान् भरोसा’मै गुज्रिरहेको छ । विदेशबाट आउनेहरु निर्बाधरुपमा नेपाल प्रवेश गर्नेक्रम बढिरहेको छ । तर, एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा समेत संक्रमणका लक्षणहरु पत्ता लगाउने वैज्ञानिक प्रविधि र उपकरण छैन ।
कुनै पनि प्रकोप वा महामारी संकेत दिएर वा बाजा बजाएर आउँदैन । चीनसँग सिमाना जोडिएको र नाकाबाट मानिसको ओहोरदोहोर तथा व्यापार सम्बन्धका कारण पनि नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहँदै आएको छ । नेपालले भ्रमण वर्ष–२०२० घोषणा गरे पनि कोरोना कहरले भ्रमण वर्षलक्षित कार्यक्रम तथा प्रचारप्रसार स्थगित गरिसकेको छ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावका कारण भ्रमण वर्ष सफल हुने संकेत नदेखिए पनि यो प्रकोपबाट जोगिनु नै नेपाल र नेपालीको हित हुने देखिएको छ । प्रविधि, उपकरण र साधनस्रोतले भरिपूर्ण मानिएको चीनले सुरूवातमा सूचना लुकाउने प्रयास गर्दा अहिले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । हजारौँको संख्यामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले आरामै नगरी काम गर्दासमेत कोरोनाको संक्रमण बढ्दो छ । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गरी हरसम्भवको प्रयास गर्दासमेत यो महामारी न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । रोकथामका कैयन उपाय अवलम्बन गर्दागर्दै पनि अतिविकसित देशहरुमा यसको प्रकोप फैलिएको छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरस राजधानी काठमाडौँमा देखा प¥यो भने त्यसले जनमानसमा कस्तो त्रास उत्पन्न होला ? सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने विषय हो यो ।
संयोग भनौँ या पशुपतिनाथको कृपा, हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छैन । चीनबाट फर्काइएका नेपालीहरुमा पनि संक्रमण नभेटिनु सुखद विषय हो । तर, संक्रमित देशबाट नेपाल आउने र कर्मचारीहरु संक्रमित देशमा भ्रमण गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन । सरकारले ढिलै भए पनि आफ्ना नागरिकलाई संक्रमण बढी भएका मुलुकमा नजान आह्वान गरेको छ । संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ठूला सभासम्मेलन र भोजभतेर नगर्न पनि आह्वान गरेको छ । नेपाल आउने पर्यटकलाई दिँदै आएको ‘अनअराइभल भिसा’ पनि फागुन २४ गतेदेखि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । संक्रमित देशबाट नेपाल आउने व्यक्तिले सम्बन्धित देशको दूतावासबाटै भिसा र अनिवार्यरुपमा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छिमेकी देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती गर्न थालेका छन् । नेपाली कामदार बढी रहेका दक्षिण कोरिया, खाडी मुलुक तथा भारतमा कोरोनाको संक्रमण देखिनु भनेको नेपालमा पनि भयावह स्थिति आउनु हो । त्यसैले, सरकारले सातवटै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीसहित ‘हेल्थ डेक्स’को व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले भने सीमा नाकाहरुमा निगरानी बढाउने, कोरोनाको लक्षणबारे सचेतना फैलाउने र संक्रमणबाट जोगिने उपायका बारेमा अभियान सञ्चालन गर्नु जरूरी देखिएको छ ।
बालबालिकाका कुरा कसरी सुन्ने ? [लक्ष्मणरेखा]